↑ "Sweat gland function of the donkey (Equus asinus)" (November 1969). The Journal of Physiology 205 (1): 79–89. doi:10.1113/jphysiol.1969.sp008952. PMID 5347721. PMC:1348626. [လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချွေးထွက်ခြင်း&oldid=744615" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၂:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။